သံလွင်: သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခြင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားတို့၏ စိုးရိမ်မှုများ
နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်မှ ပြန်လည်ကောက်ခံမည့် ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုကို ယခုနှစ် မတ် ၃၀ ရက် သန်းခေါင်ယံအချိန်မှ စတင်ကာ ဧပြီ ၁၀ ရက်အထိ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ လူဦးရေစာရင်းကောက် ယူမှု ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် တိုင်းရင်းသားများ အနေဖြင့် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် မေးမြန်းမည့် မေးခွန်း ၄၁ မျိုးကစ၍ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဆိုင်ရာ ကုဒ်နံပါတ်လွဲမှားမှု ကိစ္စများမှသည် ပြည်ပမှဝင်ရောက်လာသည့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအား မှတ်တမ်းရေးသွင်းသွားမည်ဟူသော ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်း ကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအဆုံး ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အချက်များအား ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်ရန် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများစွာ စုပေါင်း၍ ကြေညာချက်များစွာကို ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင် ခေတ်အဆက်ဆက် ကောက်ယူခဲ့သည့် သန်းခေါင်စာရင်းမှ ရရှိသော လူမှုစီးပွားရေး အချက်အလက်များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ မြို့ပြအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်း ကဏ္ဍများ၏ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ မူဝါဒများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်းတို့ကို တိတိကျကျ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ဦးစီးဌာန၏ စာတမ်းများတွင် ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများမှ အဆိုပါ အချက်အလက်များအား နိုင်ငံရေးအရ အသုံးချသွားမည်ကို စိုးရိမ်လျက်ရှိသည်။
အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့က သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် လူမျိုးအမည်အတွက် အသုံးပြုမည့် ကုဒ်အမှတ်များကို သတ်မှတ်ရာ၌ မျိုးနွယ်စုအမည်များ မှားယွင်းလွဲချော်နေခြင်း၊ မျိုးနွယ်စု မဟုတ်သည်ကို မျိုးနွယ်စုအမည်အဖြစ် ရေးသားဖော်ပြထားခြင်း၊ မျိုးနွယ်စု တစ်ခုတည်းကို ဒေသန္တရ အခေါ်များဖြင့် နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်မက ဖော်ပြထားခြင်း၊ မျိုးနွယ်စုနှစ်ခုကို တစ်ခုတည်းအဖြစ် ရေးသားဖော်ပြ ထားခြင်း၊ ၁၃၅ မျိုး မျိုးနွယ်စုစာရင်းကဲ့သို့ လူမျိုးနွယ်စု စာရင်းခွဲပါက ပါဝင်သင့်သော လူမျိုးနွယ်စုများ၏ ပကတိအဖြစ်မှန်နှင့် ကိုက်ညီမှန်ကန်မှုမရှိဘဲ ဖော်ပြပါ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၊ ကိုယ်တိုင်လက်မခံနိုင် သည့် လူမျိုးစု ၁၃၅ မျိုးစာရင်းကို အခြေခံ၍ အသုံးပြုရန် စီစဉ်ထားခြင်းသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအား အလေးမထားကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တစ်ခုတည်းအတွင်းရှိ မျိုးနွယ်စုများ၊ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှု ဖြစ်လာစေနိုင်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ကြသည်။
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများ စုပေါင်းထုတ်ပြန်ချက်များထဲတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်က တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများဖြစ်သည့် ချင်း၊ ရခိုင်၊ ကချင်၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ ကရင်လူမျိုးမှ တိုင်းရင်းသားအရေး ဆောင်ရွက်နေ သည့် အဖွဲ့အစည်း ၃၀ ကျော်မှ ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးအကြိမ် တောင်းဆိုမှုအဖြစ် တိုင်းရင်းသားထု တစ်ရပ်လုံးကို ကိုယ်စားပြုသော တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တို့နှင့် အလျင်အမြန် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပေးရန်၊ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံမည့်ရက်ကို ရွှေ့ ဆိုင်းပေးရန်၊ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရန်အတွက် အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ် အတွင်း တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်စေရေး အပါအ၀င် အချက်လေးချက်ကို ကြေညာချက် အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကာ ၎င်းတို့၏ သဘောထားများအား တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်းကော်မရှင် အနေဖြင့်လည်း ၎င်းတို့တောင်းဆိုသည့်အတိုင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ အပါအ၀င် ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်း ကော် မရှင်နှင့် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် အကူအညီပေးလျက်ရှိသည့် UNFPA မှ တာဝန်ရှိသူများက တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၀မျိုးတို့နှင့် နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင် နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှု အရ ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်းအား ရက်ရွှေ့ဆိုင်းကောက်ယူရန် မဖြစ်နိုင်သဖြင့် ဆက်လက်ကောက်ယူရန်နှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဆိုင်ရာ ကုတ်နံပါတ် လွဲမှားနေမှုများအား သန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ခံပြီးမှသာ ပြန်လည်စိစစ် ပြင်ဆင်ရန်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ တိုင်းရင်းသား များအနေဖြင့် ကျေနပ်မှုရရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲမှတစ်ဆင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီချက်များကို သတင်းထုတ်ပြန်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
သို့သော် အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်များအား သတင်းထုတ်ပြန်ရာတွင် ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်းကော်မရှင် အနေဖြင့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင် အစိုးရဘက် တစ်ဖက်တည်းမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အပြင် ဆွေးနွေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်းရင်းသားတို့ တောင်းဆိုထားသည်များနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့လုပ်ဆောင်ပေးမည်ကို တိတိကျကျ မထားသည့်အတွက် ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်း ကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် ဝေဖန်မှုများ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြန်သည်။
တိုင်းရင်းသားများ အနေဖြင့် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် မေးမြန်းမည့် မေးခွန်း ၄၁ မျိုးကစ၍ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဆိုင်ရာ ကုဒ်နံပါတ်လွဲမှားမှု ကိစ္စများမှသည် ပြည်ပမှဝင်ရောက်လာသည့် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများအား မှတ်တမ်းရေးသွင်းသွားမည်ဟူသော ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်း ကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက် များအဆုံး ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး . . . . .
ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တစ်မျိုးချင်းစီအလိုက် တွေ့ကြုံနေ ရသည့် ပြဿနာများ၌ ကချင်မျိုးနွယ်စုအောက်ရှိ လူမျိုးစုများအား သတ်မှတ်ဖော်ပြထားရာတွင် လူမျိုး အမည် မှားယွင်းဖော်ပြထားမှုများ၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင်မူ ဒေသဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းမှု အခြေအနေကြောင့် လူဦးရေစာရင်း အတိအကျ မရမည်ကို စိုးရိမ်သည်များ၊ ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ၀င်ရောက်လာသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအား သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် မှတ်တမ်းရေးသွင်းမည့်အပေါ် စိုးရိမ်နေခြင်းတို့အပြင် အခြားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အနေဖြင့်လည်း ၎င်းတို့သည် သီးခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများသာဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာမှုများလည်း ရှိလာသည်။
တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု တစ်ခုချင်းအရ ပြောရရင် ချင်းတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမည့် အချက်အလက်များအပေါ် ကန့်ကွက်ရခြင်းမှာ တိုင်းရင်းသား လူဦးရေစာရင်း ကုတ်နံပါတ်များနှင့် လူမျိုးစုနာမည်များ မှားယွင်းဖော်ပြထားခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်းကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဆိုင်ရာ ကုတ်နံပါတ်များတွင် ချင်းလူမျိုးစုအောက်တွင် ချင်းဟူသော လူမျိုးနာမည် အပါအ၀င် အခြားသော တိုင်းရင်းသား ၅၂ မျိုးအား ထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့အတွက် ချင်းလူမျိုး အဖွဲ့အစည်းများက ထောက်ပြ သည်မှာ ၎င်းတို့ချင်းလူမျိုးသည် ၅၃ မျိုး မရှိကြောင်းနှင့် ထိုကုတ်နံပါတ်များထဲတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် နာမည်များမှ ထပ်နေမှုများရှိကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ကြသည်။
“ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ Census is Politics ပဲလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာလည်း ဒီသန်းခေါင်စာရင်းကနေ နိုင်ငံရေးကို သက်ရောက်သွားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေ အနေနဲ့ဆိုလည်း ချင်းလူမျိုး ၅၃ မျိုးဆိုပြီး ဖော်ပြထားတယ်။ တကယ်တော့ ချင်းလူမျိုးက ၅၃ မျိုးမရှိပါဘူး။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ စီးပွားရေးအရပါ၊ လူမှုရေးအရပါလို့ပြောပြော မေးခွန်း ၄၁ ခုမေးမယ်ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေက လက်မခံသလို သန်းခေါင်စာရင်းကို နိုင်ငံရေးအရ အသုံးပြုသွားမှာကို အရမ်းစိုးရိမ်ပါတယ်” ဟု ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင်ရာ ချင်းအမျိုးသား အထောက်အကူပြု ကော်မတီမှ ဦးဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်က ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၀ ခန့်မှ စတင်ခဲ့သည့် အစိုးရနှင့် KIO လက်နက်ကိုင်တို့ကြား တိုက်ပွဲများသည် လက်ရှိအချိန်ထိ ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ကချင်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် စိုးရိမ်သည်မှာ ထိုကဲ့သို့သော တိုက်ပွဲများကြား သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် အခက်အခဲ များစွာ တွေ့နိုင်သည့်အတွက် အချိန်ယူ စောင့်ဆိုင်းသင့်ကြောင်း၊ မှားယွင်းနေသည့် မေးခွန်းပုံစံဖြင့် ဆက်လက်အသုံးပြု ကောက်ခံခြင်းနှင့် ဒေသအားလုံးကို ခြုံငုံမှုမရှိဘဲ ကောက်ခံခြင်းတို့ကြောင့် ရရှိလာသော ကိန်းဂဏန်းနှင့် အချက်အလက်များကို ယုံကြည်မှုမရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့သည်။
ထို့အတွက် ကချင်တိုင်းရင်းသား လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၂၉ ဖွဲ့က မတ် ၉ ရက်က ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ရပ်တည်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သလို ၎င်းတို့ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ခံမှုသည် သင့်လျော်သောအချိန် မဟုတ်သည်သာမက လူမျိုးနာမည် လွဲမှားမှုများ ရှိသည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ခေါင်းဆောင်အားလုံးနှင့် တွေ့ဆုံ၍ စနစ်တကျ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပြီးမှသာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရန် သင့်သည်ဟု ယူဆကြောင်း ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်မှ ဒေါ်ခွန်ဂျာ က ပြောကြားသည်။
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှု နီးကပ်လာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ရခိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမည့် အချက်အလက် အချို့ပေါ် ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ်လာကြသည်။ အထူးသဖြင့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများအား အစိုးရမှ မှတ်တမ်းအဖြစ် ရေးသွင်းသွားမည်ဟူသော အချက်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုတွင် ဘင်္ဂါလီများသည် မိမိတို့၏ လူမျိုးအမည်ကို ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟု ပြောဆိုပါက ဖြေကြားသူ၏ ရွေးချယ်မှုအရ သန်းခေါင်စာရင်းတွင် ဘင်္ဂါလီများအား ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟု မှတ်တမ်းရေးသွင်းခြင်းသည် သမိုင်းလိမ် ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံများအတွက် အထောက်အထား မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ဖြစ်သွားနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်ထိပါးလာနိုင်သော လုပ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းတို့က ကန့်ကွက်ကြပြီး ထိုသို့မှတ်တမ်းရေးထိုးပါက အဆိုပါမှတ်တမ်းသည် ထိုလူမျိုးတို့၏ အမှတ်သင်္ကေတ တစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့နိုင်သည့်အပေါ် စိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုအတွက်လည်း နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ရခိုင်အပါအ၀င် ကမန်၊ မြို၊ မရမကြီး စသည့် ရခိုင်မျိုးနွယ်စုအောက်ရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမှ ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်း ကော်မရှင်၏ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် အချက်အလက်များအပေါ် ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်း ရခိုင်၊ ကမန်၊ မြို၊ ခမီး၊ မရမာကြီး၊ ဒိုင်းနက်နှင့် သက်လူမျိုး စသည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များက မတ် ၂၀ ရက်က စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးကာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ရခိုင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအသင်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံလှကျော်ကလည်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟု ပြောဆိုပါက မှတ်တမ်းရေးသွင်းခြင်း မပြုလုပ်ရန် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရခိုင်နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် ရခိုင်ပြည်သူများက အစိုးရသို့ တောင်းဆိုမှု ပြုလုပ်ထားသော်လည်း အစိုးရထံမှ တိကျသည့်အဖြေ မရရှိခဲ့သေးကြောင်း၊ အစိုးရ၏ တုံ့ပြန်မှုကို စောင့်ကြည့်နေကြောင်းနှင့် တိကျသည့်အဖြေ မပေးပါက သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ရခိုင်လူမျိုးများ မဖြေကြားဘဲ ဆန္ဒပြပွဲများပြုလုပ်ကာ သပိတ်မှောက်သည့်အဆင့်ထိ လုပ်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။
“ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သန်းခေါင်စာရင်း စသည်အားဖြင့် လူမျိုးတစ်မျိုး အနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးက ကန့်ကွက်တဲ့အပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ကမန်တွေကလည်း အလားတူပဲ ဒီနေ့ကန့်ကွက်ပြီးတော့ တောင်းဆိုတာပါ။ လက်ရှိ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေ နဲ့ ပြတ်သားတဲ့ ဥပဒေဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ ဆိုလိုတာက ထည့်လို့ရတယ်။ ထည့်လို့မရဘူး စသည် အားဖြင့် ပြတ်သားတဲ့ဥပဒေ လိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်တွေ တစ်ဖက်က ဘင်္ဂါလီတွေ ဒီအပေါ်မှာ ဒီနှစ်ခုမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ အစိုးရရဲ့ ၂၀၁၅ အပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှု တစ်ခုအဖြစ် ကုန်ကြမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးချနေပြီလားဆိုတာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ စဉ်စားမိတယ်” ဟု ကမန်အမျိုးသား သာရေးနာရေးအဖွဲ့ (ရန်ကုန်) မှ ဦးတင်ငွေက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကရင်တိုင်းရင်းသားများ အနေဖြင့်လည်း ၎င်းတို့အနေဖြင့် ကရင်တိုင်းရင်းသားအမည်အား အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သုံးစွဲရာတွင် မူလသုံးစွဲနေသည့် (Karen) အစား (Kayin) ဟု သုံးနှုန်းဖော်ပြခြင်းသည် ကရင်တိုင်းရင်းသားများ၏ ဆန္ဒမပါဘဲ သုံးနှုန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြရာ မူလ Karen ဟူ၍သာ သုံးနှုန်းပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
“သန်းခေါင်စာရင်းကိစ္စက အရမ်းကို အလေးထားသင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထူးသဖြင့် လူမျိုးတွေကို သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာလည်း အမြန်ဆုံး လုပ်သင့်တယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီမှာ ၁၃၅ မျိုးဆိုတာက မှားနေတယ်ပေါ့။ ဒီ့အတွက် တကယ့်တိုင်းရင်း သားခေါင်းဆောင်တွေ ခေါ်ပြီးတော့ ပြန်သတ်မှတ်ဖို့ အစ်မတို့ဘက်က တောင်းဆိုတယ်။ ဒီမှာ အစိုးရကတော့ သူကဒီသန်းခေါင်စာရင်းပြီးမှ လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ နောက်သန်းခေါင်စာရင်း ကို နောက်ရွှေ့ဖို့ ပြောထားပေမယ့်လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုတယ်။ ဒီနေရာမှာ အစ်မတို့ ကရင်လူမျိုးတွေ အနေနဲ့လည်း လူမျိုးတွေ ကျန်ခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။ နောက် မပါဘဲနဲ့ ထည့်ရေးထားတာတွေလည်း ရှိပါ တယ်” ဟု ကရင်အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့အစည်းမှ ဒေါ်နန်းစုစုလှိုင်က ဆိုသည်။
ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သန်းခေါင်စာရင်း စသည်အားဖြင့် လူမျိုးတစ်မျိုး အနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးက ကန့်ကွက်တဲ့အပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ကမန်တွေကလည်း အလားတူပဲ ဒီနေ့ကန့်ကွက်ပြီးတော့ တောင်းဆိုတာပါ။ လက်ရှိ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေနဲ့ ပြတ်သားတဲ့ ဥပဒေဖြစ်ဖို့ လိုတယ် . . . . .
မွန်၊ ကယားနှင့် ရှမ်းစသည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများမှလည်း အခြားသော မျိုးနွယ်စုများနှင့်အတူ ကုတ်နံပါတ် လွဲမှားနေမှုများကို ထောက်ပြခဲ့ကြပြီး နာဂ၊ ပအိုဝ်း၊ ဇိုမီး စသည့်တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု များမှလည်း ၎င်းတို့သည့် ကိုယ်ပိုင်စာပေ၊ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းကြောင်းတို့ ရှိခြင်းကြောင့် သီးခြားမျိုးနွယ်စုများဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကာ ၎င်းတို့လူမျိုးစုစာရင်း အမှန်ရရှိရေးအတွက် ၎င်းတို့အား ကိုယ်စားပြုသော တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် များကို သန်းခေါင်စာရင်း ကော်မရှင်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု စာရင်းများ သတ်မှတ်ပြုစုရာတွင် ၁၉၃၁ ခုနှစ်၊ ဗြိတိသျှကိုလိုနီ လက်ထက်ကပင် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူ ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိသည့် လူမျိုးစုစာရင်းအရ လည်းကောင်း၊ ၁၉၅၃-၅၄ ခုနှစ်တွင် ကောက်ယူရရှိသည့် လူမျိုးစုစာရင်းအရ လည်းကောင်း၊ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရှေးဟောင်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုရုံး၏ အကြံပြု ချက်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်များအရ လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဌာနချုပ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုရေးရာ ကော်မတီ၏ ညှိနှိုင်းချက် အရလည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု စာရင်းအား အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးဖော်ပြခဲ့ကြောင်း လေ့ လာတွေ့ရှိရသည်ဟု ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနက ရှင်းလင်းထားသည်။
သို့သော် ယခင်က တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၂၀ ကျော်သာ ရှိခဲ့ရာမှ ယခု တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ မျိုးအထိ ဖြစ်လာခြင်းသည် လူမျိုးများစွာ ထပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စာရင်းများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ယခင်သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ မျိုးနွယ်စု သတ်မှတ်ခေါ်ယူခြင်း တွင် ပါဝင်ခဲ့သော တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် ပညာရှင်များတွင် စစ်မှန်သော တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်များအား မျိုးနွယ်စုများကိုယ်တိုင်က သဘောတူ အတည်ပြု လက်ခံခဲ့ခြင်း မရှိဘဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း များက ပြောကြားမှုများ ရှိခဲ့သည်။
ထိုသို့သော စိုးရိမ်မှုများအတွက် အချို့သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများသည် ကြိုတင်ပြည်ဆင်သည့် အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ လူမျိုးစုလူဦးရေစာရင်း အမှန်ရရှိရေးအတွက် ကော်မတီများဖွဲ့ ကာ နိုင်ငံသားကတ်များနှင့် သန်းခေါင်စာရင်းတို့တွင် လူမျိုးနာမည်များ မှားယွင်းဖော်ပြထားမှုတို့အတွက် လူမျိုးအမည်မှန်များ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးရန် စုရပ်များ သတ်မှတ်ကာ ဆောင်ရွက်လာကြသည်ကို လည်း တွေ့ရသည်။ လက်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း၌လည်း မွန်နှင့် ရှမ်းလူမျိုးတို့မှ လူဦးရေစာရင်း များ ကောက်ယူလျက်ရှိသည်။
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ ဒီမိုကရေစီ သက်တမ်းနု မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် ရှိလာသောကြောင့် ၂၀၁၄ ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်းတွင် အသုံးပြုမည့် မေးခွန်းများ၊ အချက်အလက်များ၏ လိုအပ်ချက် များအား တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများမှ ဝေဖန်ထောက်ပြမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ဗဟိုသန်းခေါင် စာရင်း ကော်မရှင်အနေဖြင့် ၎င်းတို့တောင်းဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ဆက်လက် ဆောင် ရွက်ပေး မည့် အစီအစဉ်ကိုမူ မြန်မာပြည်ဖွား ဌာနေတိုင်းရင်းသားတို့မှ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမည့်အချိန် နီးကပ်လာလေ စိုးရိမ်မှုဒီရေ တိုးလေဖြင့် စောင့်မျှော်လျက် ရှိပေသည်။
ထို့ကြောင့် လက်ရှိတိုင်းရင်းသားတို့ ဆောင်ရွက်နေမှုများအား အစိုးရအနေဖြင့် ဝေဖန်ထောက်ပြ မှု၊ တောင်းဆိုမှုများဟူ၍သာ မှတ်ယူကာ အလေးထားဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုပါက ဌာနေတိုင်းရင်းသား လူမျိုးအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက် လေးရပ်တွင် ပါဝင်သည့် ‘တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်မှု မပြိုကွဲရေး’ ဟူသော ဆောင်ပုဒ်အား တစ်ချိန်ချိန်တွင် ထိခိုက်လာနိုင် မည့်အရေး ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
at 3/24/2014 08:04:00 AM